Wararka Maanta: Isniin, Dec 21, 2020-Midowga Africa oo walwal ka qaba xiriirka sii xumaanaya ee Soomaaliya iyo Kenya
Midowga Afrika wuxuu ka digay cawaaqibka arintan ka dhala kara, iyagoo sheegay in ay taasi khatar gelin karto amniga gobolka.
Gudoomiyaha Midoga Africa Moussa Faki Mahamat ayaa ka hadlay arintan maalintii Axada intii lagu guda jiray shirkii 38aad ee Urur Goboleedka IGAD, kaasoo ka dhacay Jabuuti.
Wuxuu sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay tahay in ay ku xalliyaan khilaafaadkooda wadahadal si loo hubiyo iskaashiga gobolka ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Mudane Faki ayaa xusay in labada dal ay wadaagaan taariikh dheer oo deris wanaag ah''"Kenya, waa in la ogaadaa, in ay tahay dal ay ciidamo ku biiriyaan Amisom, isla markaana ay marti-galiso Qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa u cararay " ayuu yiri,[[ ayuu sheegay guddoomiyaha midowga Africa.
Madaxda Qaarrada ayaa labada dal culeys weyn ku saaraya in ay xaliyaan khilaafkooda, waxaana maalintii shalay kulan fool ka fool ah yeeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo arintan ka wada hadal.
12/21/2020 7:12 AM EST